माओवादीकै समर्थनमा सिंहदरबार फर्किए केपी ओली | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more माओवादीकै समर्थनमा सिंहदरबार फर्किए केपी ओली
माओवादीकै समर्थनमा सिंहदरबार फर्किए केपी ओली
फागुन ४ गते, २०७४ - ०६:५४
काठमाडाै । माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि राजीनामा दिएका ओली माओवादीकै समर्थनमा १८ महिनापछि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई १७४ सांसदको समर्थन रहेकाे छ ।
अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ- एमाले अध्यक्ष केपी ओली १८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किएका छन् । असोज ०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका उनीविरुद्ध माओवादी र कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि उनको कार्यकाल १० महिनामा सकिएको थियो । अघिल्लो साउनमा सिंहदरबारबाट बिदा भएका उनी माओवादीकै समर्थनमा सिंहदरबार पुगेका छन् ।
कार्यदलले निर्वाचन घोषणायता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति, दूरगामी महŒवका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजका लागि प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयमा गरेका निर्णय फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले भीमसेन थापालाई पहिलो प्रधानमन्त्री मान्दछ । उनी वि.सं. १८६३ मा मुख्तियार (अहिलेको प्रधानमन्त्रीसरह)को पदमा नियुक्त भएका थिए । त्यसयता वि.सं. १९०३ सम्म ६ जना प्रधानमन्त्री भएका थिए । १९०३ मा जंगबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि १०४ वर्षीय राणा शासनमा थप नौजना प्रधानमन्त्री भए ।
००७ मा प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि ०४६ सम्म १२ जना प्रधानमन्त्री भए । ०४६ यता १० जना नेता प्रधानमन्त्री भए । यसरी जम्मा ३८ जना प्रधानमन्त्री भए पनि पटकपटक दोहोरिँदा ६२ पटक शपथ लिएका छन् । यसरी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने ३८औँ व्यक्ति र ६२औँ सरकार प्रमुख हुन् ।
फागुन ४ गते, २०७४ - ०६:५४ मा प्रकाशित